I-Eco-cabin ibalekela igridi e-Muskoka
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
Nqamula kwaye uqhagamshele kwakhona kwindalo kolu hambo lungenakulibaleka lwendlwana yegridi eMuskoka.
I-vibe ye-Foret Cabins yinto elula yanamhlanje, nayo yonke into oyifunayo ukuze uphumle ngokwenyani kwindalo.
Yakhelwe kusetyenziswa i-eco-practices, i-cabin inikwe amandla ngamapaneli elanga kwaye yenzelwe ukuhlala ishushu ebusika kwaye ipholile ehlotyeni. Nangona kukho i-wifi, sinethemba lokuba uya kuyeka ukuyisebenzisela ukujonga iinkwenkwezi kwibhedi ephezulu ebusuku okanye uzipholele phambi kwesitovu seenkuni.
Landela kwi-IG @foretcabins
Ikhabhinethi ikwindawo enamahlathi eehektare ezingama-60, kwaye ibucala kakhulu. Indawo yayiyilwe njengendawo yokubaleka yokwenyani, ijikelezwe yimithi.
Indawo ihlotshiswe nge-aesthetic yanamhlanje kunye ne-minimalist, igxile kwi-vintage kunye ne-decor ezinzileyo.
Kukho indlela yokuhamba ngeenyawo kwipropathi ukuya kumhlaba omanzi kunye nomjelo omhle onelitye elikhulu legranite elilungele ukwenza ipiknikhi.
Yenzelwe ukuhlala 'ocothayo', i-cabin imema ukukhupha kunye nokupheka phezu komlilo wenkampu okanye ukugoba phambi kwesitovu seenkuni.
I-screened kwiveranda yenza kube lula ukunandipha ubusuku be-Muskoka ngaphandle kwesongelo se-mosquitos.
I-Baysville ikwichibi laseMuskokas elimangalisayo leLake of Bays, enemisebenzi engapheliyo yawo onke amaxesha onyaka. Incinci kodwa inamandla, iBaysville likhaya leendawo zokutyela ezintle, ikhefi, indawo ethengisa utywala, ukuqubha kawonke-wonke, i-ayisikrimu kunye namagcisa asekhaya. Imizuzu nje engama-20 ukusuka eBracebridge, eHuntsville, naseDwight, akukho kunqongophala kweendawo zokufumana, ukusuka kwi-skating, ezantsi ezantsi kunye nokunqumla ilizwe lokutyibiliza, ukuqubha, ukukhwela isikhephe, ukukhwela intaba kunye neengxangxasi.
Sihlala imizuzu engama-20 kude eHuntsville kwaye siyafumaneka ukuba ufuna nantoni na.